LR41: यी सेलहरु वा ब्याट्रीहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस् नि: शुल्क हार्डवेयर
इसहाक | 05/10/2021 08:39 | इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू
को ठूलो रकम छ विभिन्न भोल्टेज संग ब्याट्री, क्षमताहरू, र फारमहरूको भीडसँग पनि। प्रत्येक एक विशेष प्रकारको उपकरणमा उन्मुख। ती मध्ये एक हामीले पहिले नै विगतमा विश्लेषण गरिसकेका छौं, यो हो CR2032। अब, यस लेख मा, हामी यो को एक "बहिनी" को विश्लेषण गर्नेछौं, यो जस्तै छ LR41, जो कि तथाकथित बटन ब्याट्री संग सम्बन्धित छ।
यसको विशेषताहरु यो केहि प्रकार को लागी आदर्श बनाउँछ अनुप्रयोगहरू जहाँ आकार र अवधि मामिला छ, र बिजुली को मांग संग अन्य ठूला यन्त्रहरु मा उच्च को रूप मा छैन ...
1 LR41 ब्याट्री के हो?
1.1 जहाँ LR41 ब्याट्री किन्न
2 ब्याट्री को बारे मा अधिक
2.1 ब्याट्री प्रकारहरू
2.1.1 रिचार्जेबल छैन
LR41 ब्याट्री के हो?
La ब्याट्री वा LR41 ब्याट्री यो बटन परिवार मा ब्याट्री को एक प्रकार हो। यो पनि alkaline र गैर rechargeable मानिन्छ। यसको भोल्टेज १.५ भोल्ट छ, इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु को लागी एक कम उर्जा माग को लागी जस्तै घडी, लेजर सूचक, क्यालकुलेटर, र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु को लागी एक सानो आकार संग।
तिनीहरूको सेल को संरचना को बारे मा, ब्याट्री को यो प्रकार को उपयोग विभिन्न रसायनहरु यसको funtionability को लागी। एक बाहिरी धातु को आवरण संग जसको सकारात्मक ध्रुव समतल भाग हो जहाँ शिलालेख सामान्यतया हुन्छ, विपरीत अनुहार नकारात्मक ध्रुव भएको संग। अवधि को लागी, तिनीहरू भण्डारण मा3बर्ष सम्म हुन सक्छ।
जहाँ LR41 ब्याट्री किन्न
तपाइँ धेरै विशेष पसलहरुमा ब्याट्री को यी प्रकार पाउन सक्नुहुन्छ, यद्यपि ती टाइप ए को रूप मा सजीलो छैन, जो अधिक लोकप्रिय छन्। जे होस्, अमेजन जस्ता प्लेटफार्महरुमा तपाइँ सक्नुहुन्छ खरिद गर्नुहोस् प्रति यूनिट वा प्याकमा:
१० ब्याट्री प्रकारको म्याक्सेल प्याक LR10
2 एकाइहरु LR41 को Camelion प्याक
Duracell 376/377 LR41 इकाई
ब्याट्री को बारे मा अधिक
यो हुनु पर्छ ब्याट्री र ब्याट्री बीच भेद गर्नुहोस्, यद्यपि सामान्यतया दुबै सर्तहरु उदासीन रुपमा प्रयोग गरीन्छ (कारण अंग्रेजी मा ब्याट्री शब्द हो, जो अस्पष्ट छ र दुबै को लागी काम गर्दछ), यदि तपाइँ अधिक सख्त हुन चाहानुहुन्छ, तपाइँ निम्न गर्न सक्नुहुन्छ:
ब्याट्री: ब्याट्री यसको चार्ज रिकभर गर्न सक्छ यदि एक विद्युत वर्तमान यो आपूर्ति गरीएको छ, त्यो हो, त्यहाँ कुनै ब्याट्रीहरु कि रिचार्जेबल छैन। यसको अतिरिक्त, उनीहरु दिन वा महिनाहरुमा स्वयं डिस्चार्ज भोग्छन् जब उनीहरु प्रयोग गरीरहेका छैनन्।
Pila: यो एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया बाट गुज्रन्छ, र जब उनीहरु डाउनलोड गरीन्छन् उनीहरुलाई पुनः लोड गर्न सकिदैन। यसको सट्टामा, उनीहरु महत्वपूर्ण आत्म-निर्वहन बिना वर्ष को लागी भण्डारण गर्न सकिन्छ।
स्ट्याक्स विभाजित गर्न सकिन्छ दुई महान परिवारहरु, र उनीहरु भित्र उनीहरु पनि प्रकार र विशेषताहरु अनुसार सूचीकृत गर्न जारी राख्न सक्छन्:
को गैर रिचार्जेबल ब्याट्रीहरु उनीहरुलाई लोड गर्न को लागी कोशिश गर्नु हुदैन, किनकि उनीहरु क्षतिग्रस्त हुन सक्छन्, उनीहरु त्यसका लागि बनेका छैनन्। तिनीहरू एकल प्रयोग को लागी मात्र डिजाइन गरीएको हो। यस समूह भित्र छन्:
बेलनाकार: तिनीहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन्, र ती व्यक्तिहरु तपाइँ पर्खाल घडीहरु, रिमोट कन्ट्रोल, आदि मा पाउन सक्नुहुन्छ। यी मध्ये हुन्:
क्षारीय: आज धेरै सामान्य छन्। उनीहरु एनोड को रूप मा जिंक र क्याथोड को रूप मा मैंगनीज डाइअक्साइड बाट बनेका छन्। ब्याट्री को यस प्रकार धेरै टिकाऊ छ, र उचित संरक्षण को लागी लगभग 25ºC वा कम मा राख्नु पर्छ। आयाम अनुसार, त्यहाँ AA (LR6), AAA (LR03), AAAA (LR61), C (LR14), D (LR20), N (LR1) र A23 (8LR932), सबै १.५ भोल्ट र विभिन्न आकारहरु संग छन् , पछिल्लो एक जो 1.5V छ बाहेक।
सालिनास: यि ब्याट्रीहरुमा जिंक-कार्बन छ, र ती क्षारीयहरु को तुलना मा तिनीहरुको कम क्षमता र अवधि को कारण बढ्दो उपयोग मा छन्। तपाइँ पनि एए, एएए, एएएए, आदि को रूप मा एकै प्रकार को पाउनुहुनेछ, तर उनीहरु फरक आईईसी र एएनएसआई कोड छन्।
लिथियम: उनीहरु आफ्नो संरचना मा लिथियम शामिल छन्, र त्यहाँ धेरै कम आत्म-निर्वहन संग धेरै प्रकार को हुन सक्छ, प्रति वर्ष मात्र १% को। यसको अतिरिक्त, उनीहरुसँग एक धेरै फराकिलो परिचालन दायरा छ, -1ºC बाट 30ºC सम्म। भित्र तपाइँ फलाम र लिथियम डाइसल्फाइड पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै १.५ वी एए वा एएए, ३.70 वी लिथियम-थियोनिल कोलोरो, ३ वी लिथियम मैंगनीज डाइअक्साइड ...
आयताकार: जसरी उनीहरुको नामले सुझाव दिन्छ, उनीहरु आयताकार आकारको ब्याट्री हुन्, बेलनाकार बाट फरक। विगतमा उनीहरु धेरै लोकप्रिय थिए, यद्यपि आज उनीहरु आफ्नो आकार को कारण धेरै प्रयोग गरीरहेका छैनन्। यी मा, 4.5v माथि भोल्टेज पुग्न सकिन्छ।
क्षारीय: LRs को रूप मा ज्ञात ती ब्याट्री प्याक वा 4.5LR3 को लागी 12v बाट PP9 (3LR6) को लागी 61v सम्म, फ्ल्यासलाइट ब्याट्री (6LR4) को लागी 25v बाट हुन सक्छ।
सालिनास: बेलनाकार को रूप मा, उनीहरु पनि प्रयोगमा परेका छन् र विरलै मात्र प्रयोग गरीन्छ, मात्र धेरै विशिष्ट अनुप्रयोगहरु को लागी जहाँ उनीहरु क्षारीय मा केहि लाभ हुन सक्छ। तपाइँ PP6 र PP9 जस्तै केटाहरु पाउनुहुन्छ ...
लिथियम: त्यहाँ पनि वर्ग लिथियम ब्याट्रीहरु छन्, सामान्यतया लिथियम thionyl क्लोराइड वा लिथियम मैंगनीज डाइअक्साइड संग। दुबै 9v।
टांक: यस खण्ड भित्र यो लेख को LR41 प्रविष्ट हुनेछ। तिनीहरू ब्याट्रीहरु हुन्, जसरी उनीहरुको नामले सुझाव दिन्छ, बटन आकारको हो। तिनीहरू कम बिजुली माग र सानो आकार, जस्तै घडीहरु, श्रवण उपकरण, आदि संग उपकरणहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ।
क्षारीय: उनीहरु १.५ वी ब्याट्रीहरु, LR1.5, LR54, LR44, LR43 र LR41 जस्तै कोड संग छन्।
लिथियम: त्यहाँ पनि 3v को भोल्टेज संग केहि छन्। एक लामो उपयोगी जीवन र धेरै फराकिलो तापमान दायरा मा काम गर्न को लागी सक्षम छ। यी ब्याट्रीहरु लिथियम मैंगनीज डाइअक्साइड को लागी सीआर र लिथियम-पॉली कार्बोनेट मोनोफ्लोराइड को लागी बीआर (लिथियम थिओनिल क्लोराइड पनि अवस्थित छ, यद्यपि ती दुर्लभ छन्, ३.v वी र जीवनकाल १० बर्ष भन्दा बढि हुन सक्छ, महत्वपूर्ण अनुप्रयोगहरु र टीएल कोड को लागी)। उदाहरण को लागी, CR3.6, CR10, CR1025, BR1216, CR2032, आदि। ती सबै फरक आयाम संग।
रजत अक्साइड: उनीहरु 1.55v पुग्न सक्छन् र एक धेरै राम्रो कम तापमान प्रदर्शन छ। उनीहरु SR कोड, जस्तै SR41, SR55, SR69, आदि द्वारा प्रतिष्ठित छन्।
वायु जस्ता कोषहरु: उनीहरु को आकार र सजिलो स्थापना को कारण सुन्न एड्स मा धेरै सामान्य छन्। 1.4 भोल्ट को भोल्टेज संग। यसको कोड PR हो, PR70, PR41 जस्तै ...
क्यामेरा ब्याट्रीहरु: उनीहरु अघिल्लाहरु जस्तै छन्, र त्यहाँ लिथियम पनि छन्, तर उनीहरु सामान्यतया यी उपकरणहरु को लागी विशेष प्याकेजि in्ग मा आउँछन्। तिनीहरू आकार मा ठूला छन्, र3देखि6भोल्ट सम्म भोल्टेज आपूर्ति गर्न सक्छन्। यस मामला मा सीआर कोड संग। जस्तै CR123A, CR2, 2CR5, CR-V3, आदि।
जसरी यसको नामले स indicates्केत गर्दछ, उनीहरु ब्याट्री हुन्, यद्यपि धेरै भन्छन् रिचार्जेबल ब्याट्रीहरु (वास्तव मा, उनीहरु एउटै ढाँचा र गैर रिचार्जेबल ब्याट्री को रूप मा देख्न सक्छन्)। ब्याट्रीहरु को यी प्रकार एकल उपयोग को लागी लक्षित छैनन्, तर धेरै चार्ज-निर्वहन चक्र संग, बारम्बार प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा साधारण छन्:
लिथियम ब्याट्रीहरु को लागी एक NiCd वा NiMH चार्जर को उपयोग नगर्नुहोस्, वा यसको विपरीत। सही एक प्रत्येक मामला मा प्रयोग गरिनु पर्छ।
NiCd: यी निकल-क्याडमियम ब्याट्रीहरु धेरै लोकप्रिय थिए, र ती कम र कम प्रयोग गरीरहेछन् उनीहरुको मेमोरी प्रभाव को कारण। अन्य शब्दहरुमा, यसको क्षमता उपयोग संग कम हुन्छ। उनीहरु को बारे मा 2000 चार्ज र निर्वहन चक्र, जो एक धेरै उल्लेखनीय आंकडा हो अन्तिम गर्न सक्नुहुन्छ।
NiMH: उनीहरु धेरै लोकप्रिय छन्, र अघिल्लो को रूप मा धेरै मेमोरी प्रभाव छैन। यसको अतिरिक्त, उनीहरु उच्च ऊर्जा घनत्व को समर्थन, जो पनि सकारात्मक छ। उनीहरुको उच्च आत्म-निर्वहन दर र NiCd को तुलना मा कम चार्ज गति छ। तिनीहरू तापमान मा परिवर्तन को लागी अधिक संवेदनशील छन्। तिनीहरू 500 र 1200 चार्ज-डिस्चार्ज चक्र को बीच अन्तिम।
ली-आयन: तिनीहरू सबैभन्दा धेरै आज आफ्नो शानदार गुणहरु को लागी प्रयोग गरीरहेका छन्। उनीहरु NiCd र NiMH को तुलना मा प्रति सेल उच्च ऊर्जा घनत्व को समर्थन, त्यसैले उनीहरु धेरै कम्पैक्ट र हल्का निर्माण गर्न सकिन्छ। तिनीहरूको मेमोरी प्रभाव व्यावहारिक रूपमा नगण्य छ, जस्तै उनीहरुको आत्म-निर्वहन दर हो, तर उनीहरु कमजोर बिन्दुहरु छन्, किनकि तिनीहरुको स्थायित्व NiCd चक्र सम्म पुग्न सक्दैन। यस अवस्थामा, तिनीहरू 400 र 1200 चार्ज-डिस्चार्ज चक्र को बीचमा छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू » LR41: यी ब्याट्रीहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस्
Photodetector: यो के हो, यो के को लागी हो र यो कसरी काम गर्दछ